Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Gobalka Gedo. – Calamada.com
Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Gobalka Gedo.
calamada May 10, 2016 1 min read
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday difaacyada ciidamada Kufaarta Kenya ay ka sameysteen duleedka degmada Baardheera ee gobalka Gedo’iyadoona dagaalka la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Difaacyada lagu weeraray ciidamada Kenya ayaa ah difaacyo Nasaarada Kenya ay ka sameysteen dhanka Galbeed ee duleedka degmada Baardheera oo qeyb ka ah goobaha shisheeyaha kaga suganyihiin gobalka Gedo.
Dhawaaqa rasaasta dagaalka ayaa si aad ah looga maqlayay xaafadaha degmada iyo qaar ka mid ah deegaanka hoostaga Baardheera’iyadoona sidoo kale ciidamada Mujaahidiinta hubka culus ku garaaceen difaacyadaasi.
Sidoo kale ciidamada Nasaarada Kenya ayaa dagaalka kadib waxey tiro madaafiic ah ku garaaceen howdka duleedka degmada Baardheera’iyagoo cabsi xoogan ka muujinaya in ciidamada Mujaahidiinta difaacyada ugu daataan.
Habeen hore ayeey aheed markii sidoo kale dagaal culus lagu qaaday difaacyada ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya iyo maleeshiyaatka kabo qaadka u ah ay ka sameysteen deegaanka Buurdhuxulle ee gobalka Bakool.
Previous: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 03-08-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 03-08-1437 Hijri.